पेप्सी`कोला सन-सिटी अपार्टमेन्टका कोरोना मुक्त भएका एक व्यक्तिमा पुन: संक्र`मण !! – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /Corona (COVID-19) Updates/पेप्सी`कोला सन-सिटी अपार्टमेन्टका कोरोना मुक्त भएका एक व्यक्तिमा पुन: संक्र`मण !!
काठमाडौँ । सनसिटी अपार्टमेन्टका कोरोना मुक्त भएका एक व्यक्तिमा पुन: कोरोना संक्र`मण देखिएको छ । डिस्चार्ज भएको ११ दिनपछि पी.सी,आर विधिबाट परी`क्षण गराउँदा अपार्टमेन्टमा ५८ बर्षिय पुरु`षमा पुन: कोभिड – १९ पोजेटिभ देखिएको हो ।
स्वास्थ्य मन्त्रालय स्रोतका अनुसार उनलाई अहिले पाटन अस्पतालको आ`इसोलेसनमा राखिएको छ । उनी र उनकी ८१ बर्षीया आमा गत ११ बैशाखमा कोरोना मुक्त भएर डिस्चार्ज भएका थिए ।उनको फलोअप आउँदा पीसीआर विधिबाट पुन: परी`क्षण गरिएको थियो ।
नेपालमा कोरोना मुक्त भएर घर गएका व्यक्तिमा पुन परी`क्षण गर्दा पोजेटिभ देखिएको यो पहिलो केस भने होइन् । विश्व स्वास्थ्य संगठनले यसअगाडी नै संक्रमित व्यक्तिहरुमा पुन कोरोनाको लक्षण देखिन सक्ने बताएको थियो । नेपालमा मात्र होइन अन्य देशहरुमा पनि यस्ता केसहरु बाहिर आइरहेका छन्